DEG DEG:-Somaliland oo Xabsigna u Taxaabay Masuul Caan ah oo Madaxweyne Farmaajo La Saftay iyo Ciidanka….. | Allpuntland24.com
DEG DEG:-Somaliland oo Xabsigna u Taxaabay Masuul Caan ah oo Madaxweyne Farmaajo La Saftay iyo Ciidanka…..
Ciidammada sirdoonka Somaliland ayaa xabsiga u taxaabey Maxamed Kayse Bigeeye oo la sheegay in uu buug ka qorayay madaxwaynaha Soomaaliya sidda ay xaqiijiyeen ehelada wiilkan la xidhay.
Qoraaga qoray buuggaan loogu magac daray Tusaalaha Guusha ee Eng. Maxamed keyse ayaa maalintii saddexaad ku xidhan magaalada Hargeysa waxaana lagu heystaa buuggaan oo uu ka qoray madaxweynaha Soomalia maxamad Cabdillahi farmaajo.
Inkastoo weli buugga aan la soo bandhigin ayaa haddana qoraaga waxa uu bartiisa facebook-ga ku soo bandhigay ogeysiis ah buugga in uu dhameystiray qoristiisa goordhawna uu soo bandhigi doono balse Ciidamada sirdoonka Somaliland ayaa xabsiga u tixaabay.
Wiilkan ayaa xabsiga loo taxaabey kadib markii uu shaaciyey in uu ku guddo jiro diyaarinta buug uu ugu magac darey “Tusaalaha Guusha” oo uu kaga hadlaayo madaxwaynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo.
Eng Maxamed Kayse Maxamuud oo ku nool magaalada Hargaysa deegaan ahaana ka soo jeeda Bariga Burco ayaa shaley oo ahayd sabti maxkamada gobolka Maroodi-jeex la horgeeyay, balse maxkamadda ayaa amartay in dib loo dhiggo kiiska wiilkan.
Ehelada wiilkan oonu xidhiidh la sameynay ayaa sheegay in lagu guddo jiro kiiska wiilkooda. Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in wiilkani uu xidhiidh dhow la lahaa madaxda dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir “Maareeye”.
Maxamed Kayse oo ah wiilka xidhan ayaa bartiisa Facebookga tiraba dhowr jeer hore ugu soo banadhiggay sawirro uu kula jiro wasiir Maareeye oo ka tirsan dawladda Soomaaliya.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay xukuumadda Somaliland oo ku aadan xadhiga Maxamed Kayse.
Waa markii ugu horeysay ee magaalada Hargaysa ama Somalilad lagu xidho qof sheegay in uu buug ka qoraayo madaxwaynaha Soomaaliya.